Ny olana ara-barotra amin'ny mailaka dia tsy misy dikany raha tsy voatsara amin'ny finday ianao | Martech Zone
Raha nikasa ny hanatsara ny fifandraisanay izahay, ny zavatra voalohany nataonay dia ny fampiharana ireo maodelin'ny mailaka mamaly amin'ny alàlan'ny platforminay, CircuPress, hizara ny atiny (Misoratra anarana isan'andro na isan-kerinandro). Tsy dia nahagaga ny fanovana ny antontan'isa. Mandefa mailaka isan-kerinandro amin'ireo mailaka maherin'ny 70,000 izahay amin'ny Alatsinainy ary ny anay Analytics mampiseho amintsika fa izany no fiakaran'ny fifamoivoizana mihoatra ny medium na fampiroboroboana rehetra.
Tsy nitranga izany raha tsy namboarina ho mailaka finday ny mailaka! Fandaminana an-tsanganana madio sy tokana misy tsindry mora sy tsindry be dia be no nahatonga ny fahasamihafana rehetra tamin'ny fanosehana ny olona hiala amin'ny mailaka hiverina amin'ireo lahatsoratra. Ankehitriny izahay dia miasa amin'ny fanavaozana tanteraka ny bilaogy mba hanomezana traikefa tsara sy mamaly amin'ny alalàn'ny birao, finday na takelaka.
Na tiana na tsia, ny fampiasana fitaovana finday dia lasa toetrantsika faharoa. Milamina sy milamina tokoa izao tontolo izao. Tsy mitovy ny fihetsiky ny mpanjifa amin'ny finday smartphone sy ny takelaka, izay manome fampiasa sy fahaiza-manao isan-karazany, ary ho an'ny orinasa maro dia midika izany fa afaka manomboka mahita ny sasany amin'ireo mpanjifany mandeha lavitra izy ireo raha toa ka tsy mora ny varotra finday. Ny fananana paikady finday azo ampiasaina dia ilaina mba hitazomana ny mpanjifa hiverina. Ciaran Carlisle, DisplayBlock
Ny statistika dia tsy mampino fotsiny ho an'ny finday… raha tsy mailaka mpampiasa na findainao ny mailakao na ny tranokalanao dia manary vola aman-taonina amin'ny fampiasam-bolanao ianao. Ireto misy antontan'isa 3 ho anao:
Ny fisokafan'ny mailaka finday dia nitombo 180% ao anatin'ny telo taona monja manomboka amin'ny 15% ka hatramin'ny 42%!
A hitsofoka 68% an'ny Gmail sy Yahoo! manokatra miseho amin'ny smartphone na tablette.
75% ny mailaka zahana amin'ny finday dia azo inoana fa ho voafafa raha tsy voatsara amin'ny finday.
Tags: statistikan'ny marketing amin'ny mailakamailaka misokatramailaka statistikaFivarotana finday sy tablettemailaka findaymailaka mamaly findaymailaka mamalyfinday avo lentamailaka finday avo lentamailaka takelaka
Sep 6, 2014 amin'ny 1: 00 AM
Izay zava-misy mahagaga indrindra mahita fa ny ankamaroan'ny mpampiasa finday avo lenta dia manokatra mailaka amin'ny findainy !!!